PetrPikora.com on May 28, 2018
Drábské Rooms no sisa tavela amin 'ny lapa vita amin'ny hazo am-boalohany momba ny vatovary vato ao amin'ny cadastral Dneboh ao amin'ny faritr'i Mlada Boleslav, 4 km atsinanan'i Munich Hradiste. Miorina ao amin'ny faritra arovana ao amin'ny Czech Paradisa, amin'ny faritanin'i Eoropeana sy ny maha zava-dehibe Natura 2000 voajanahary tahirim Příhrazské vato. Ny vatolampy fiarovana mafy naorina teo avaratry lelan-sehatra atao hoe Castle Amin'ny Altitude ny momba 370 M (105-155 metatra ny fikorianan'ny 'ny renirano Jizera). Castle satria 1958 arovana izay tafiditra ao ny lehibe ara-kolontsaina tsangambato, nandrakotra ny faritra midadasika kokoa amin'ny mifanila Klamorna lapa. Ny tompon'ilay fananana sarotra ny lapa dia amin'ny Repoblika Tseky, ny fitantanana sy ny fikarakarana ny tsangambato no miantoka Ala ao amin'ny Repoblika Tseky.
Voaro mafy ponenana ny tsy fantatra anarana no naorin'i ny arkeolojika ao amin'ny firaketana an-tsoratra indraindray vanim-potoana faharoa 13. nandritra ny hetsika fanjanahantany manan-danja ny zaridainan'ny Cistercian. Drábské Rooms amin'ny Klamorna akaiky sy fortification Old Castle Příhrazy am-boalohany, fara fahakeliny, nanompo toy ny mpiambina hevitra, miambina ny monasitera faritany fa ny sasany kosa Pojizerské lalana. Maro ny fikarohana momba ny arkeôlôgy no maneho ny fisian'ny trano mandra-pahatongan'ny 14. taona ary kely kely amin'ny 15. taona, rehefa heverina fa haverina amin'ny laoniny ny ady Hussites.
Ny fampiasana ny toerana voasokajy nandritra ny vanim-potoana maoderina taloha koa dia raketin'ny petroglyphs ara-tantara. Misy soratra vitsivitsy amin'ny 16. ary 17. Taonjato maro miaraka amin'ny fanoratana loharanom-piraketana dia mamela ny fivorian'ny mpikambana ao amin'ny firaisan'ny mpirahalahy sy ny mety hijanonan'ireo pretra Utrakvistic. Ny sisin'ireo vato kely sy vato mialoha ny fiarovana dia nanova ny fitrandrahana vato vato.
Ilay tranobe dia naorina teo amin'ny vato na dimy na vato, misaraka amin'ny tery tery. Ao amin'ny ambaratonga maromaro 15-40 M ambony vatolampy dia voatahiry sarin-javatra samy hafa toerana roa-polo asa, dimy residues hazo vita sokitra lalantsara rehefa afaka fito fanorenana trano sy ny tetezana, ary dimy voapaika tavy fisotroana evidencing anchoring palisades hazo. Teo an-tsisin'ny ny vatolampy dia afaka ihany koa ny hazo hanangana indray walkways eo amin'ny vato dia voatahiry dragee famaranana ny triatra. Hanjaka ny fisehon'ny manontolo dia tilikambo hazo goavana ny fiarovana ny fidirana ho any anati-ny fampiatoana na ny drawbridge. Moyen Âge fidirana Nentina avy tany atsinanana ny kilalao miendrika biriky vato mifandray amin'ny mitohy outcrop. Ny lehibe indrindra ao amin'ny efi-trano ny trano fiangonana lapa - nipetraka efitrano sarin-javatra alitara, hita ao 1921.
Drábské světničky dia toerana mahafinaritra mpizaha tany. Androany ny fidirana amin'ny fizahantany-sculpted ambany vatolampy hirika angamba tany 1830, ny tohatra dia nitarina tany amin'ny faharoapolo taonany ny taonjato faharoa-polo, ny Club ny mpizaha tany Tsekoslovakia. Ankehitriny, ny ampahany lehibe indrindra amin'ny faritra be vato ambony biriky mifampitohitohy rafitra ny tohatra sy ny tetezana (fitsidihana).
Ny fitsidihana ny lapa dia maimaim-poana ary mihazakazaka tsy misy mpitari-dalana. Ny fitsidihana an-tsehatra dia manomboka amin'ny vavahady fidirana hazo, navaozina tamin'ny 2016. Ity ampahany amin'ny tsangambato ity dia azon'ny mpitsidika avy hatrany amin'ny 1. Avril à 31. Oktobra, amin'ny andro, amin'ny toetr'andro voafetra.
Ny lalana fohy indrindra ho any amin'ny vatolampy eny an-mitarika Massif manga andalana avy ao amin'ny fitobiam-piarakodia ao an-tanàna Kavčiny Dneboh (0,6 km). Ny akaiky indrindra fiantsonan'ny fiaran-dalamby tao an-tanàna Brezina amin'ny tsipika no. 070 Prague-Turnov manaraka ny mavo-marika lalana hiala amin'ny Castle Rock 2,5 kilometatra.
Fihanihana faritra Drábské světničky tsy ampy anjara Příhrazské avaratra andrefan'i tendrombohitr'i eo amin'ny trano rantsan-kazo eo amin'ny tsara tarehy izany ary Klamorna. Ao amin'ny tarika vato roa kilaometatra ela no voalaza 111 915 vatolampy rehefa niakatra lalana.
Vatolampy mahatafintohina rehetra mifandray amin'ny lapa Drábské Rooms ireo hetsika rehetra niakatra ho amin'ny fiarovana ny kolontsaina relìka voarara. Izany dia mihatra amin'ny zavatra voatanisa ao amin'ny banky angona 'ny Czech Mountaineering Association: Drabske Massif, ireo mpiaraka, Drabske tsanganana, efatra-ravinkazo clover sy avaratra ary ny atsinanana manda ny tilikambo Dráb.
Czech ParadisaDrábské RoomsNATURE 2000
11 famantaranandro lasa izay
Andro 1 lasa izay